Global Voices teny Malagasy » Sodàna: Miezaka ho velona tsy ampian’ireo ONG · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Novambra 2019 2:21 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriel Borges Nandika (fr) i Rakotomalala, avylavitra
Sokajy: Sodàna, Tchad, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Ny 4 Martsa 2009, ny Cour Pénale Internationale (CPI) dia namoaka didy fampisamborana ho an'ny filohan'i Sodàna , Omar Hassan al-Bashir. Ho valifaty dia 13 ireo ONG noraràna dieny ny ampitson'io tsy hahazo hiasa ao amin'ilay firenena, isa tafakatra ho 16 ny herinandro taorian'izay. Vokany, betsaka ireo tetikasa fanampiana no naato: nisy tamin'izy ireny ny nampiditra rano fisotro, ny nanome sakafo, fitsaboana ary fandaharam-pampianarana.
Vokatr'izany dia Sodaney marobe no voatery nandao ny firenena mba hitady fialofana any ivelany. Victor Angelo  [amin'ny teny portiogey] dia nandeha namonjy ny toby Goz Beida, 200 kilaometatra any atsinanan'i Abéché ao Tchad. Nandefa sary vitsivitsy izy ary nitatitra momba ireo fanafihana tanterahan'ireo Jenjawid , milisy mpitaingin-tsoavaly karamain'ny governemanta ao Sodàna.
” Henoy tsara. Ity saripika ity dia maneho sodaney iray mpialokaloka, nihaona tamiko tao Goz Beida, 200 km atsinanan'i Abéché ao Tchad nandritra ny fitsidihana niarahako tamin'i Bernard Kouchner sy Alain Le Roy.”
“Ny vokatry ny fandroahana ireo ONG 13 tao Sodàna tamin'ny fianakavian'ireto lehilahy ireto no isan'ireo olana mampiasa saina ny rehetra. Inona no hanjo ny fianakavian'izy ireo, ireo izay mbola tavela any Darfour ary miantehitra amin'ny fanampiana noho ny maha-olona amin'ireo filàna fototra, toy ny rano, ny sakafo, ny fahasalamana ary ny fampianarana?”
“Izay hiafaran'ny filoha Al-Bashir no ifantohan'ny saina manontolo. Nankatoavin'ireo mpialokaloka ny fanapahakevitry ny Fitsaràna Heloka Bevava Iraisampirenena.”
Iray tamin'ireo niharam-boina tamin'ny fanafihan'ny Jenjawid, milisy mitam-piadiana sy manao andiany, tanan-kavanan'ny filoha sodaney. Ireo Jenjawid sasany, fomba fiantson'ny ao an-toerana ny “lehilahy mitaingin-tsoavaly” no toa tena tompon'antoka voalohany tamin'ireo heloka an'ady.
Mpitsabo avy amin'ny Médecins Sans Frontières  no nikarakara ireo olona tao amin'ny faritra Abéché. Na ny ONG be mpahalala toa azy aza dia isan'ireo noraràna tsy ho ao Sodàna. Angamba ny toerana misy ireo mpialokaloka no toerana saropady indrindra niasan-dry zareo. Ao Kalma, any atsimon'i Darfour, ilay toby mirefy 6 kilaometatra toradroa misy olona 100.000 miaina anaty “trano” vita amin'ny hazo, plastika ary izay rehetra azo ampiasaina hiarovan-tena amin'ny hafanana be rehefa antoandro, sy hatsiaka be rehefa alina.
Tao amin'ny toby Kalma, nanokatra klinika iray ny MSF anolorana fitsaboana fototra, toerana iray natokana hitsaboana ny vehivavy ary birao iray ho fanampiana sy fisorohana. Tao amin'ilay toerana natao handraisana ireo vehivavy, 200 hatramin'ny 300 teo ho eo isanandro ireo marary noraisin-dry zareo mandritra ny herinandro. Vahiny sy Sodaney no nandrafitra ny tarika – ireo Sodaney sisa no mbola miasa ao amin'izao fotoana izao. Kanefa, araka ny voalazan'i Lydia Geirsdottir, tomponandraikitr'ilay toby, ao anatin'ireo sisa tavela, roa monj no manana fahaizana manokana hisahana fitsaboana. Ankoatra izay, lany vetivety ny tahirin-tsakafo. Maneho hevitra ao amin'ny tranonkalan'ilay ONG i Cintia Rojo  [ amin'ny teny portiogey] momba ireo vaovao:
“Miatrika ny olana momba ny maha-olona tsy mbola nisy hatrizay i Darfour . Raha lazaina amin'ny fiteny hafa, dia toerana iray io izay singambolo sisa no mitàna ny aina. Tsy fanjariantsakafo, aretina, herisetra. Lasa olana maharitra ny olana ao Darfour, ary satria efa tena ela no naharetany, dia adinon'ny fianakaviambe iraisampirenena izy. Hampipongatra olana goavana ny fialan'ireo ONG satria ny ankamaroan'ireo fanampiana dia ireny fikambanana ireny no manome azy.”
Darfour, ny 5 Martsa. Ny sary fampahafantarana etsy ankavia dia mampiseho amin'ny alàlan'ny tarehimarika ny fiantraikan'ny fandroahana ONG any amin'ny vahoaka: olona 4,7 tapitrisa. Ireo ONG 13 : Action Contre la Faim; Solidarité; Save the Children (UK et US) Médecins Sans Frontières (Hollande & France) ; Care International ; Oxfam ; Mercy Corps ; International Rescue Committee ; Norvegian Refugee Coucil ; CHF ary PADCO. Loharano: ReliefWeb . Azonao kitihana ilay sary raha tianao ho lehibe kokoa.
Efa mihoatra ny 20 taona no tao Sodàna ny Save the Children , ary nandritra ireo enina taona farany dia niaraka niasa tamin'ireo mpialokaloka vokatry ny ady tao Darfour sy Kordofan atsimo, faritra iray niatrika ny fiverenan'ireo olondehibe sy ankizy maherin'ny 50.000 tamin'ny 2008, ary faritra mahazatra nametrahana ireo sampana mpikarakara fahasalamana vonjitaitra. Araka ny lazain'i Charles MacCormack , filohan'io ONG io, ny fisintahan'ny Save the Children dia mametraka olana goavana ho an'ireo olona 1 tapitrisa eo amin'ireo ankizy sy ny fianakavian-dry zareo, izay notohanan'ireo masoivoho roa tao atsinanan'i Darfour , tao Kordofan avaratra, tao Kordofan atsimo ary tany amin'ireo fanjakana sy vondrompiarahamonina ao amin'ny Ranomasina Mena ao Abei sy manakaiky an'i Khartoum. »
Ankoatra ireo tetikasa hafa, Save the Children no misahana ny fitsinjaràna ny sakafo (3583 taonina anaty faritra 44 ), sy ny rano ary ireo fotodrafitrasa momba ny fahadiovana (fantsakàna 448 sy paompy 177 , manome rano ho an'olona manodidina ny 201.500 eo ho eo). Hita amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fambolena ary ny fanorenana sy fampianarana ihany koa ry zareo.
(Mpialokaloka – Sary an'i V. Ängelo)
Efa 20 taona mahery ny CARE  no niasa tao amin'ny firenena, noroahana ihany koa ry zareo, nampiato ny asa rehetra nosahaniny, ary nogiazan'ny governemanta sodaney ny ampahany tamin'ireo fitaovany, toy ny solosaina, fiara sy trano. Nisehatra tamin'ny fambolena, rano, fampitaovana momba ny fahadiovana, ny fampianarana ary ny fahasalamana ny CARE. Taterin'ny Norwegian Refugee Council  fa tsy vitan'ny hoe nogiazana ny fitaovan-dry zareo, fa koa nosamborina sy niharan'ny herisetra ireo mpiasa tao aminy. 26 taona no efa niasa tao Sodàna ny Oxfam  izay noterena hiala tao amin'ny firenena. Miandry izay hahafahany miverina izy ireo ankehitriny.
Henjana ny toedraharaha ao Darfour, hoy i AK ao amin'ny bilaogy Forsudan  [teny anglisy]:
“Teo noho eo ny valinkafatry ny governemanta tao Khartoum. Rehefa avy niresaka tamin'ireo solontena vitsivitsy avy amin'ireo fianakaviako ao Sodàna aho, toa mba efa mihatsara ny raharaha, ary araka ny nambaran'ny iray amin'ireo zanaky ny iray tampo amin'ny ray aman-dreniko “mitohy toy ny mahazatra ny raharaha rehetra”. Nandrasan'ny olona ny hisian'ny fanafihana voarindra ataon'ireo mpihoko avy amin'ny Hetsika ho an'ny Fitoviana sy ny Rariny, mitovitovy amin'ilay nitranga tamin'ny Martsa 2008. Nandrasan'ny olona ihany koa ny mety hisian'ny fitomboan'ny herisetra, saingy tsy nisy nitranga ny tahaka izany. Na izany aza, somary hendratrendratra ihany ny olona ao an-toerana ary manahy ny amin'izay hitranga. Heveriko fa ny tena mampiasa saina be azy ireo dia ny fiantraikan'ny fifanarahana fandriampahalemana ifanaovan'ny Avaratra sy Atsimo (CPA), ary ny ho fihetsiky ny governemanta tatsimo. Ity [anatin'ity lahatsoratra ity] ireo toerana noraisin'ireo antoko goavana sodaney. Fanampin'izany, ONG marobe no noroahan'ny governemanta, ka isan'ireny ny OXFAM, CARE ary ny Médecins Sans Frontières.
Ny vinavinan'ny ankamaroan'ireo ONG dia hoe hisy loza mahatsiravina hitranga any amin'ireo toby fandraisana mpialokaloka, ary olona maherin'ny 4,7 tapitrisa no hidonan'izany; anatin'ireo dia 2,7 tapitrisa no handeha hanao sesitany ny tenany. Ankaotra izay, olona 1,5 tapitrsa no mila fikarakarana ara-pahasalamana, 1,1 tapitrisa no tsy mahita hanina hohanina, ary 1 tapitrisa no tsy manana rano fisotro (antontankevitry ny OCHA ). Raha tsy horesahana ny fipongaran'ny aretinandoha ‘meningite’, izay aretina “tsy vita tsaboina ao amin'ilay toby, tsy misy fitaovana fitaterana marary ho any amin'ny hopitaly any Nyala, no sady tsy misy na kely aza fanaovana vaksiny faobe. Midika izany fa mety ho faty ireo olona ireo ” hoy ny tatitr'i Lydia Geirsdottir  (MSF) [teny anglisy] .
Manoloana ireny olana ireny, nanambara  [teny anglisy] i Lisa Grande, mpandrindra maharitry ny Firenena Mikambana no sady mpandrindra ny maha-olona ho an'ny faritra Sodàna atsimo fa: “Iray amin'ireo fiantraikany ezahany ho vinavinaina ny fifindramonina faobe mety hitranga”. Olona maherin'ny 100.000 no marefo amin'ny fanafihan'ny LRA izay mpialokaloka ao amin'ny faritra ny 36.000 amin'ireo, nandositra ny trano fonenany tany Sodàna atsimo, ary mpialokaloka maherin'ny 16.000 avy any RDC. « olona maherin'ny 50 000 amboniny any anivon'ireo vondrompiarahamonina mpampiantrano… no marefo sy mila fanohanana amin'ny maha-olombelona » hoy i Lisa Grande mamarana ny teniny.
Efa nanomboka sahady ny fifandramonina faobe, araka ny voalazan'ireo tatitra sasantsasany mipoitra eny anaty bilaogy maro. Taterin'ny sudan-blog  [anglisy] ny fisian'ny fananganana toby iray vaovao ao Tchad, firenena mpifanolobodirindrina, handraisana mpialokaloka miisa 6.000 eo ho eo.
Lahatsoratra nosoratana voalohany tamin'ny teny portiogey, ary i Thiana Biondo  no nandika azy ho teny anglisy ho an'ny Global Voices.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/13/143247/
 namoaka didy fampisamborana ho an'ny filohan'i Sodàna: https://fr.globalvoicesonline.org/2009/03/05/3272/
 Abéché : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%A9ch%C3%A9
 Cintia Rojo: http://cintiarojo.blogspot.com/2009/03/um-absurdo-em-proporcoes-gigantescas.html
 hoy ny tatitr'i Lydia Geirsdottir: http://www.msf.org.au/from-the-field/field-news/field-news/article/interview-expulsion-leaves-healthcare-vacuum-for-100000-in-kalma-camp-darfur.html